Jeneraal ZAKIYA: “Inta aan xilkan hayo ma aroosi karo” – WARSOOR
Taliya ku-xigeenka labaad ee ciidamada booliska Soomaaliya Jeneral Zakiya Xuseen ayaa qortay sheeko kooban oo nolosheeda ku saabsan oo ay ugu magac dartay “Xilka iyo xubiga kala dooro”, taas oo ay uga hadleyso sababta aysan u guursan illaa iyo hadda. Hoos ka aqriso sheekada.
Sadax bilood ka dib, xalay ayuu isoo wacay. Waxuu yiri sxbeey warkaa maalin hore igu dhahaysay ayaa soo xaqiiqsaday manta! Oo maxaa dhacay ayaa ku yidhi.
NB; Marxaladaan waa dhib haysta kaliya gabdhaha xilal sare haaya, ragga dhigaheenaa ah xaalkooda waa فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ
Ra’iisul wasaare Rooble oo Xafiiskiisa ku qabilay danjiraha Dawladda Imaaraatka u fadhiya Soomaliya